I-Visa yaseUkraine | IVisa eUkraine | natvisa.com
Isicelo seVisa sase-Ukraine kwi-Intanethi
Icandelo loMphathiswa Wezangaphandle eUkraine lisandula ukwazisa inkqubo yekhompyuter yokufumana i-visa. Umthetho wakhutshwa nge-14 ka-Agasti ka-2020. Phantsi kwale nkqubo intsha, abemi bamazwe angama-45 kuphela, kubandakanya uMzantsi Afrika, iPhilippines kunye ne-India, banokufumana i-visa ye-elektroniki. Abahambi abakhetha i-visa ye-elektroniki akusayi kuphinda batyelele kwi-Embassy okanye bajongane neetoni zamaphepha Kuya kufuneka bagcwalise isicelo kwi-intanethi, bafake amaxwebhu afunekayo kwaye ekugqibeleni bahlawule umrhumo wevisa. Emva kokuqhubekeka kwefom yesicelo, i-visa evunyiweyo iya kuthunyelwa nge-imeyile kubafakizicelo, ngaloo ndlela iyenza yonke inkqubo ibe lula kwaye ilula.
Iinkcukacha zeVisa yaseUkraine
Yintoni i-eVisa yaseUkraine?
I-eVisa yaseUkraine luxwebhu olubaluleke kakhulu ekufanele ukuba wonke umhambi alufumane ukuba baceba ukutyelela eli lizwe. Olu luxwebhu olusemthethweni oluya kuvumela undwendwe ukuba lundwendwele i-Ukraine kunye nokuhamba ngaphakathi kommandla walo. Le nkqubo intsha yaziswa ukwenza kube lula ukuba umhambi afumane imvume yakhe yokuhamba ngaphandle kwesidingo sokundwendwela uMzi woZakuzo okanye iposi.
Ungasifaka njani isicelo se-eVisa ukuya eUkraine?
Inkqubo epheleleyo yokufaka isicelo se-eVisa inokwenziwa kwi-Intanethi ngamanyathelo amathathu nje alula. Zezi;
Bhalisa: Abafakizicelo kufuneka kuqala kwaye baphambili ukuze babhaliswe kwiqonga lewebhu le-MFA. Nje ukuba babhaliswe, abafaki-zicelo kufuneka bagcwalise ifom yesicelo sabo ngolwazi oluchanekileyo.
Ngenisa amaxwebhuAbafaki-sicelo kufuneka bawaskene amaxwebhu afunekayo kwaye bawafake kwifom yesicelo.
Yenza intlawulo: Okokugqibela, abafaki-zicelo kufuneka benze intlawulo besebenzisa ikhadi elisebenzayo letyala okanye ikhadi lebhanki.
Emva kokuba ifom yesicelo iqhutyelwe, i-eVisa evunyiweyo iya kuthunyelwa nge-imeyile yomenzi-sicelo. Bayacelwa ukuba bayikhuphele kwaye bafumane iprintawuthi.
Umyalelo wabakhenkethi Ukufaka isicelo se-eVisa eUkraine?
La mazwe alandelayo anelungelo lokufumana i-visa ngombane. La mazwe yiBahamas, iBarbados, iBelize, iBolivia, iBhutan, iCambodia, iChina (ngaphandle kuka-Agasti 1, 2020, ukuya kuJanuwari 31, 2021), eCosta Rica, kwiRiphabhlikhi yaseDominican, e-El Salvador, eFiji, eGrenada, eGuatemala, eHaiti, IHonduras, India, Indonesia, Jamaica, Kiribati, Laos, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexico, Micronesia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nicaragua, Palau, Peru, Philippines, Saint Lucia, Saint Vincent kunye neGrenadines, Samoa, Seychelles, Singapore. , KwiiSolomon Islands, eMzantsi Afrika, eSuriname, eThailand, eTimor-Leste, eTrinidad naseTobago, eTuvalu, eVanuatu. Urhulumente waseUkraine uvumela abemi bala mazwe alandelayo ukuba bangene eUkraine ngaphandle kwevisa. La mazwe yi-Australia, New Zealand, uBukumkani baseBahrain, i-State of Kuwait, iSultanate yase-Oman kunye ne-Kingdom of Saudi Arabia. Nangona kunjalo, abahambi abavela kula mazwe banokuhlala kwiintsuku ezingama-90 ngaphezulu kweentsuku ezili-180.
Ulawulo lwethutyana olungena-visa luvumelekile kubemi base China ngeenjongo zokhenketho.
I-eVisa yaseUkraine luxwebhu lokugunyazisa ukuhamba olunikezelwa ngurhulumente waseUkraine kubahambi abatyelele eli lizwe.
Ngaba wonke umntu unokulufumana ukhetho lwe-eVisa?
Hayi, abemi bamazwe angama-43 kuphela bavunyelwe ukuba basebenzise ukhetho lwe-eVisa.
Ngayiphi injongo umhambi anokufumana i-eVisa?
Abahambi banokufumana i-eVisa ngezi njongo zilandelayo-ukhenketho, unyango, utyelelo lobuqu, ezemidlalo kunye nemisebenzi yesayensi okanye yenkcubeko.
Ngawaphi amaxwebhu ayimfuneko ukufaka isicelo se-eVisa yaseUkraine?
Amaxwebhu ayimfuneko ukufaka isicelo se-eVisa yile: ifoto, ipasipoti, uxwebhu oluqinisekisa injongo yotyelelo, njl.
Abafaki zicelo baya kuwathumela njani la maxwebhu?
Abafakizicelo kufuneka kuphela bawaskenele amaxwebhu kwaye bawathumele nefom yesicelo.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka eboniswe xa ufika?
Abafaki zicelo kufuneka bangenise i-eVisa yabo evunyiweyo kunye nepasipoti esebenzayo xa befika.
Ngaba abafaki zicelo bayacelwa ukuba bandwendwele uMzi woZakuzo kwinkqubo yesicelo?
Hayi, abafaki-zicelo banokwenza yonke inkqubo yokufaka isicelo kumakhaya abo.
Abafakizicelo baya kulufumana njani ulwazi malunga nenqanaba labo levisa?
Abafakizicelo banokundwendwela iwebhusayithi karhulumente ukujonga imeko ye-eVisa.
Abafaki zicelo bayakufumana njani i-eVisa yabo?
I-eVisa eya eUkraine iya kuthunyelwa kwi-imeyile yomenzi-sicelo.
Baza kuhlawula njani abenzi-sicelo umrhumo we-eVisa?
Abafakizicelo banokukhetha ukusebenzisa i-credit card okanye i-debit card yabo esebenzayo ukuhlawula umrhumo we-eVisa.